Daawo sawirada:Ilhaan Omar oo fadeexad aad u weyn soo wajahday kadib markii…. | Baahin Media Warka Somalia iyo Somalida
WARARKA MAANTA Daawo sawirada:Ilhaan Omar oo fadeexad aad u weyn soo wajahday kadib markii….
Daawo sawirada:Ilhaan Omar oo fadeexad aad u weyn soo wajahday kadib markii….
Ilhan Cumar oo ka mid ah mudanayaasha aqalka Congresska dalka Maraykanka ayaa waxaa markale soo wajahday fadeexad cusub oo ah xiriirka kala dhexeeya Tim Mynett oo ah madaxa dhaqaale ururiyaha Ilhan Cumar.
Axmed Xirsi oo muddo dheerba ka shakisanaa in xiriir saaxibtinimo uu kala dhexeeyo Ilhan Cumar oo 39 ir ah Tim Mynett oo ah ninka dhaqaalaha u ururiya ayaa sida lagu daabacay wargeyska Daily Mail waxa uu Axmed gudaha u u galay guriga ay ka degen tahay Washington Ilhan iyada iyo Mynett oo xiran dharka hurdada taasoo ah mid aysan suurtogal ka ahayn haweeney Islaam ah inay ku kacdo.
Wargeyska ayaa daabacay in Axmed Xirsi uu isaga laabtay guriga Ilhan isagoo aad u xanaaqsan. Axmed ayaa kula nool magaalada Minneapolis carruurta ay u dhashay Ilhan halka ay Ilhan degen tahay magaalada Washington.
Ilhan Cumar ayaa aad loogu dhaleeceeyaa in ay ka tagtay seygeeda isla markaana uu xiriir kala dhexeeyo Mynott oo isaga laftiisa furay xaaskiisa.
Wargeyska ayaa soo bandhigay sawiro muujinaya Tim Mynott oo baco ku wata qamri badan galayana guriga ay ka degen tahay Ilhan magaalada Washington.
Hase yeeshee ma jiro ilo ka madax banaan wargeyska oo xaqiijinaya sawirada uu soo bandhigay.
Sidoo kale wargeyska ayaa daabacay in Ilhan ay lacag gaareysa 250,000 oo dollar siisay Axmed Xirsi si uu ugaga aamuso fadeexadan cusub ee soo wajahday Ilhan.
Axmed Cumar ayaa wargeysku sheegay inuu guursaday Ladan Axmed oo kalkaaliye caafimaadka carruurta ka shaqeysa,waxayna labaduba haatan ku sugan yihiin Boqortoyada Sacudi Carabiya iyagoo soo cimreystay.
Ilhan cumar iyo fadeexada cusub
Previous articleWeriye ka tirsanaa TV-ga Universal oo goor dhow toogasho lagu dilay
Next articleMaxaa ka jirra inay golaha wasiirada Somaliland ka shireen safarka Farmaajo?
XOG: Maxaa ka soo baxay kulan 3-geesoodka ee Farmaajo, Qoor Qoor & Fahad Yaasiin?
Dhageyso:-Dhalinyaro In Ka Badan 8 Sano Ku Xirnaa Kenya Oo Ku Soo Wajahan Muqdisho
Daawo Soomaali sheegatay doontii ay qarxiyeen ciidanka midowga Yurub ee la dagaallanka burcad badeedda
Dil aad u argagax badan oo goor dhow kadhacay mid kamid ah degmooyinka gobolka Banaadir
DAAWO: Goobo dalxiis oo Cusub oo Laga Daah-furayo Muqdisho…
Sawirro:Qabanqaabada Soo Dhaweynta RW Kheyre Oo Ka Socota Marka
Ciidanka Jubbaland Oo Sheegay In Ay Fashiliyeen Qaraxyo Ismidaamin ah
Madaxweyne Farmaajo iyo wafdi uu horkacayo oo Maalinta beri ah ku sii jeeda..
XOG” Maxaad Ka Ogtahay Heshiiska Dhexmaray Ganacsatada Suuqa Bakaaraha Iyo Al-Shabaab?
Midowga Afrika Oo Si Kulul Uga Jawaabay Weerarkii Al-Shabaab Ka Fuliyeen Hotel Cas-Caseey Ee Kismaayo